အရမ်းဆင်းရဲလွန်းတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ၊ ယောက်ကျားက မိန်းမကို ထားခဲ့ပြီး အလုပ်သွားလုပ်သောအခါ ... - CeleLove
July 15, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်ပညာပေး 0
လက်ထပ်တာ ၁ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ အရမ်း ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ တနေ့မှာ ယောက်ကျားလုပ်သူက မိန်းမကို ပြောတယ်။ မိန်းမရေ ငါတို့တော့ ဒီအတိုင်းနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ ငတ်သေဖို့ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ငါမြို့တက်ပြီး သူဌေး တစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ် …။
ဘာအလုပ်ရမယ် ဘယ်နှယ်နှစ် ကြာမလဲတော့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ကိုယုံပါ နင်ကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဖူး။ နင်လည်း ငါ့ကို သစ္စာရှိမယ်ဆိုတာ ယုံတယ်လို့ ပြောပြီး မိန်းမကို သူ မြို့ပေါ်တက်အလုပ် လုပ်မယ်ဆိုပြီး တိုင်ပင်တယ်။ မိန်းမကလည်း ရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။
အဲလိုနဲ့ လူငယ်ဟာ မြို့ပေါ်တက်သွားပြီး အလုပ်ရှာတယ်။ သူတို့ရွာနဲ့ အရမ်းအလှမ်းဝေးတဲ့ မြိ်ု့ တစ်မြို့က သူဌေးတစ်ယောက်ဆီမှ အလုပ်ရတယ်။ သူဌေးကလည်း အလုပ်စဝင် ကတည်းက သူ့အပေါ် ကောင်းတယ်။ နေစရာပေးတယ်။ ထမင်းအလကား ကျွေးထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ လူငယ်ကလည်း ကျနော့် လစာကို သူဌေးပဲ သိမ်းထားပေးပါ။ ကျနော် ရွာအပြီး ပြန်မှပဲ အကုန်မှတ်ထားပြီး ထုတ်ပေးလိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ် …။
သူဌေးကလည်း လူငယ်ပြောတဲ့ အတိုင်း သူ့လုပ်အားခ ငွေတွေကို သိမ်းထားပေးတယ်။ အဲလိုနဲ့ လုပ်လိုက်တာ အနှစ် ၂၀ ပြည့်တဲ့အထိ တခါမှ မပြန်ဖြစ်ဘူးတဲ့..။ အနှစ် ၂၀ ပြည့်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ လူရွယ်က သူ့သူဌေးကို ပြောတယ်။ သူဌေး ခင်ဗျာ ကျနော် အိမ်အပြီး ပြန်ပါတော့မယ်။ ကျနော်စုထားတဲ့ ငွေတွေ ပြန်ပေးပါ ဆိုတော့ ….
သူဌေးက ကောင်းပြီ။ ငါမင်းကို ပြန်ခွင့်ပြုတယ်။ နောက်တစ်ခုက မင်းကိုရွေးစရာ ၂ ခုပေးမယ်။ ၁ ခုက မင်းစုထားတဲ့ ငွေတွေ အကုန်ပြန်ယူသွားလို့ ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက မင်းဘဝ အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ အကြံပေး စကား ၃ ခွန်းပေးလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ၂ ခုထဲက တစ်ခုပဲ ရွေးရမယ်။ စုထားတဲ့ငွေတွေ ယူရင် အကြံပေးစကား ၃ ခွန်းမရဘူး …။
အကြံပေးစကား ၃ ခွန်း လိုချင်ရင် စုထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်မပေးဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ လူငယ်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန် ၁ ရက်ပေးမယ်။ လူငယ်လည် စဉ်းစားတာပေါ့။ သူ့ သူဌေးပေးတဲ့ အကြံတွေဟာ ဘဝအတွက် အသုံးဝင်မှာ သူသိတယ်။ အိမ်ပြန်ရင် အနှစ် ၂၀ တောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ငွေပြန်ပေးနိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ ဘာမှ မပါသွားရင်လည်း အကုန်လုံးရဲ့  ဝိုင်းဝန်း ကဲ့ရဲ့  ခြင်းကို ခံရနိုင်တယ်။ အဲလိုနဲ့ မနက်ရောက်တော့ သူ့သူဌေးရဲ့  အကြံပေး စကား ၃ ခွန်းကိုပဲ ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် ပါတယ် …။
သူ့ သူဌေးကလည်း မင်းသေချာပြီလား။ အကြံပေး စကား ၃ ခွန်းယူရင် မင်း အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး စုထားတဲ့ ငွေတွေ ပြန်ရမှာ မဟုတ်ဘူးနော် ဆိုတော့။ လူငယ်က သေချာပါတယ်။ ကျနော် သူဌေးဆီမှာ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး လုပ်ပြီး အများကြီး သင်ကြားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ မိသားစု တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းလုပ်ကြွေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူဌေးပေးမဲ့ အကြံပေး စကား ၃ ခွန်း ကလည်း ကျနော် အတွက် အရမ်း အသုံးဝင်မှာ သေချာပါတယ် လို့ ပြန်ပြော တယ် …။
သူဌေးကလည်း အေးဒါဆို ငါမင်းကို အကြံပေး စကား ၃ ခွန်း ပဲ ပေးလိုက်မယ်။ သေသေချာချာ မှတ်သားသွား ကောင်လေးရေ လို့မှာလိုက်တယ်။ အကြံပေးစကား ၃ ခွန်းက …..
( နံပတ် (၁) ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ အလွယ် ဖြတ်လမ်း မလိုက်နဲ့။ ဖြတ်လမ်း လိုက်တဲ့သူဟာ သူ့ ဘဝ တစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ရတတ်တယ်တဲ့ ….
နံပတ် (၂) ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို မစပ်စု မပတ်သက် ပါနဲ့တဲ့ ….
နံပတ် (၃) စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန် ဒါမှမဟုတ် နာကျင်ဝမ်းနည်းနေချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချ ပါနဲ့တဲ့ …. )
နောက်ပြီး သူဌေးက လမ်းစရိတ်ငွေ အနည်းငယ်နဲ့ လူရွယ် လမ်းမှာ စားဖို့ ပေါင်မုန့် ၃ လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ မင်း ဒီပေါင်မုန့် ၂ လုံးက လမ်းမှာ စာရင်စားဖို့။ ဒီ တစ်လုံးကတော့ မင်းမိသားစုနဲ့ တွေ့မှ စားဆိုပြီး မှာလိုက်တယ် …။
အဲလိုနဲ့ လူရွယ်ဟာ အိမ်ပြန်ဖို့ အထုတ်အပိုးတွေနဲ့ ထွက်လာတာပေါ့။ တော်တော်လည်း လျောက်မိရော။ လမ်းစုံ လမ်းခွ တစ်ခုတွေ့တယ်။ အနှစ် ၂၀ တောင် ရှိပြီဆိုတော့ အိမ်ပြန်လမ်းလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီနားမှာတွေ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မေးတယ်။ ဘယ်လမ်းသွားရမလဲဆိုတော့ အဲဒီလူက ဒီလမ်းကသွားရင် ၅ ရက်နဲ့ရောက်မယ် ဟိုဘက်လမ်းက သွားရင် အရက် ၂၀ လောက်ကြာမယ်ဆိုပြီး ပြန်ဖြေတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ သူဌေး ပထမဆုံး ပေးတဲ့ အကြံပေးစကား သွားသတိရ လိုက်တယ် …။
အဲဒါက ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ အလွယ် ဖြတ်လမ်း မလိုက်နဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဖြတ်လမ်း မလိုက်တော့ပဲ အရက် ၂၀ သွားရတဲ့ ပိုကြာတဲ့ လမ်းကို ရွေးလိုက်တယ်။ အဲလိုနဲ့ တပတ်လောက် သွားမိတဲ့ အချိန်မှာ တခြားခရီးသွားဖော်တွေနဲ့ ဆုံမိပြီး ပြန်ကြားတာက ၅ ရက်ပဲ သွားရတဲ့လမ်းမှာ ဓါးပြတွေ ရှိတယ်တဲ့..။ ဓါးပြတွေက ပစ္စည်းယူရုံသာ မက လူပါသတ်ပြီး အပျောက်ရှင်းလေ့ရှိတယ်တဲ့..။ အဲဒါနဲ့ သူ့သူဌေးပေးလိုက်တဲ့ အကြံပေးချက်ဟာ သိပ်မှန်ပါလား ဆိုပြီး ကျေနပ်သွားတယ် …။
အဲလိုနဲ့ လမ်းမှာ နားဖို့ ဟိုတယ်လေးတွေ့တယ်။ သူ့မှာ ရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေက ညစ်ပတ်နေပြီး။ ရေးမိုးချိုးပြီး တစ်ညလောက် နားချင်တာနဲ့ အဲဒီဟိုတယ်မှာ တည်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တယ် …။
အဲလိုနဲ့ ညဖက် သန်းခေါင်ယံ အချိန်မှာ အသံနက်ကြီး ကြားရတယ်။ အဲဒါနဲ့ လူငယ်ဟာ ဟိုတယ် အခန်းကနေ ထွက်ကြည့်တယ်။ ဟိုတယ် အရှေ့ဘက်မှာ အလင်းရောင်တောက်ပနေတယ် …။
အဲဒီနောက် သူအလင်းရောင် ရှိတဲ့ရှိ သွားကြည့်မယ် လုပ်ပြီးမှ နံပတ် (၂) အကြံပေးစကားကို သွားသတိရတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို မစုပ်စု မပတ်သက်နဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဒါငါနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလေ ဆိုပြီး။ သူ့အခန်းထဲ ပြန်ဝင်အိပ်နေလိုက်တယ်။ မနက်လင်းတော့ မျက်နှာသစ်ပြီး နံနက်စာစားတော့ ဟိုတယ် မန်နေဂျာက အံသြတဲ့ မျက်နှာနဲ့ သူ့ကိုကြည့်နေ ပါတယ်တဲ့ …။
အဲဒါနဲ့ လူရွယ်ကို မေးတယ် မင်း ညက အသံနက်ကြီး မကြားရဘူးလားတဲ့..။ ကြားတာပေါ့လို့ ပြန်ပြောတယ်။ ဟိုတယ် အပြင်ဘက်မှာရော တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင် မတွေ့ဘူးလား ဆိုတော့ တွေ့ပါတယ်ပေါ့။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာ မင်းသွားမကြည့် ဘူးလားဆိုတော့။ မကြည့်ပါဘူး။ ငါနဲ့မှ မဆိုင်တာ ဆိုပြီး ပြန်ဖြေ လိုက်တယ် …။
အဲဒီကျမှ ဟိုတယ် မန်နေဂျာက သူ့ကို ရှင်းပြတယ်။ အေးမင်းသွား မကြည့်လို့ မင်း အသက်ရှင်တာ.။ အဲဒါ စုန်းမကြီး တစ်ယောက်က အရမ်းလှတဲ့ ကောင်မလေး ပုံစံ ဖန်တီးပြီး လာရပ်နေတာ..။ ထွက်ကြည့်မိတဲ့ လူတိုင်း ကောင်မလေး ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ စုန်းမကြီး နောက်လိုက်သွားရပြီး။ တစ်ယောက်မှ ဟိုတယ်ကို ပြန်မလာခဲ့ကြဘူး။ မင်း တစ်ယောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အခုလို ထွက်မကြည့်လို့ အသက်ရှင်ရတာ..။ ငါတို့လည်း သူ့ကို ကြောက်လို့ ကြိုမပြောထားရဲဘူးလို့ ပြန်ပြောတယ် …။
လူရွယ်လည်း ဒုတိယ အကြံပေးချက်ဟာလည်း အရမ်းအသုံးဝင်ပြီး သူအသက်ရှင်ခွင့် ရပါလားဆိုပြီး ဝမ်းမြောက်နေတာပေါ့.။ အဲလိုနဲ့ သူ့အိမ်ရှိရာဘက် ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီး သူ့ရွာကို ရောက်လာတယ်။ ရောက်တဲ့ အချိန်က နေဝင်ရီတရောအချိန် သူ့အိမ်ကို ခမ်လှမ်းလှမ်းက မြင်နေရတယ်။ အဲဒီချိန် မီးရောင်အောင်မှာ သူ့မိန်းမကို ယောက်ကျားတစ်ယောက်က ဖက်ထားတာကို လှမ်းတွေ့လိုက်တယ် …။
သူ့ဒေါသတွေ ဆူဝေသွားတာပေါ့။ ကြည့်စမ်းငါက သစ္စာရှိရှိနဲ့ သေအောင်ကြေအောင် အလုပ်လုပ်ပြီး ငွေရှာခဲ့ရသလောက် သူက တခြားယောက်ကျားနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတယ်။ နင်တို့ နှစ်ယောက်လုံးကို သတ်မယ်ဆိုပြီး သွားမလို့ ခြေလှမ်းလိုက်တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ တတိယ အကြံပေးချက်ကို သွားသတိရမိလိုက်တယ် …။
အဲဒါက စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန် ဒါမှမဟုတ် နာကျင်ဝမ်းနည်းနေချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချ ပါနဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူမသွားတော့ပဲ မနက်ကျမှ သူ့မိန်းမ သွားတွေ့မယ်လို ဆုံးဖြတ်ပြီး အိမ်နဲ့ ခမ်းလှမ်းလှမ်းက လယ်တောထဲမှာ အိပ်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အိပ်နေရင်း စဉ်းစားမိတာက။ သူထင်သလို ဟုတ်နေရင် သူ့မိန်းမနဲ့ သူ့ချစ်သူကို မသတ်တော့ဘူး။ တိတ်တိတ်လေးပဲ သူ့သူဌေးဆီပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားနေလိုက်တယ် …။
အဲလိုနဲ့ မနက်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူအိမ်သွားပြီး တံခါးခေါက်လိုက်တယ်။ သူ့မိန်းမက တံခါးထွက်ဖွင့်ပေးပြီး သူ့ယော်ကျားမှန်း သိတာနဲ့ ချုံးပွဲချ ငိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ကျားက သူ့မိန်းမကို စောင့်တွန်းလိုက်ပြီး နင့်အကောင် ဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ မိန်းမက ဘယ်အကောင်လဲဆိုတော့မှ ညက နင်နဲ့ဖက်နေတဲ့ အကောင်လေဆိုတော့မှ။ အဲဒါရှင့်သား ရှင့် သိရဲ့ လားလို့ ငိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ ရှင်ထွက်သွားပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ ကျမမှာ ကိုယ်ဝန်ကျန်ခဲ့မှန်းသိတယ် …။
အဲဒါ အခုသူ့အသက် ၂၀ အရွယ်ထိ မဖောက်မပြန်ပဲ သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလို့ ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ မိန်းမက အခန်းထဲမှာ အိမ်နေတဲ့ သူ့သားကို နိုးပြီးဒါ နင်အဖေလေဆိုပြီးပြတယ်။ အဲဒီတော့မှ ယောက်ကျားလည်း မိန်းမနဲ့ သားကိုဖက်ပြီးငိုတယ်။ တော်သေးတယ်ကြည့်စမ်း ငါမှားတော့မလို့။ မနေ့ညက နင်တို့သားအမိကို တွေ့ပြီး ဒေါသ အလျောက်သတ်မိတော့မလို့။ ငါ့သူဌေး အကြံပေးစကား နားထောင်မိလို့ မသတ်မိတာဆိုပြီး သားနဲ့ မိန်းမကို ပြန်ပြောပြတယ် …။
ငါ့အနှစ် ၂၀ လုပ်အားခကို မယူပဲ သူဌေး အကြံပေးစကား ၃ ခွန်းကို မြေဝယ်မကျ နားထောင်ခဲ့လို နင်တို့နဲ့ အသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရတာ..ဆိုပြီး သူလမ်းမှာ ကြုံခဲ့ရတာတွေ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြတယ်။ ငါမှာ ဘာငွေမှ မပါပေမဲ့ ငါ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ နင်တို့ သားအမိကို ကောင်းကောင်းလုပ်ကျွေးပါ့မယ် ဆိုပြီး နှစ်သိမ့်လိုက်တယ် …။
ငါမှာ မိသားစုနဲ့တွေရင်စားဖို့ ပေါင်မှန့် တစ်လုံးတော့ ရှိသေးတယ်။ မိန်းမ နင်ကော်ဖီဖျော် ဒီပေါင်မုန့်နဲ့ မနက်စာ စားကြတာပေါ့ ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။ ပေါင်မုန့် လှီးနေရင်းနဲ့ ခပ်မာမာလေး တခုကို လှီးမိတာနဲ့ ထုတ်ကြည့်တော့ ရွှေပြားတွေ ပေါင်မုန့်ထဲမှာ မြှပ်ထားတာတွေ့ရတယ် …။
အဲဒီထဲမှာ စာလေး တစ်စောင်လည်းတွေ့ရတယ်။ ဒါမင်း အနှစ် ၂၀ လုပ်အားခနဲ့ ညီမျှတဲ့ ရွှေတွေပဲတဲ့။ အောက်မှာ သူ့သူဌေးလက်မှတ် တိုလေးနဲ့။ လူရွယ်လည်း သူ့သူဌေးမျက်နှာကို ပြန်မြင်ယောင်လာပြီး သူ့သူဌေးပေးတဲ့ အကြံပေး စကား ၃ ခွန်းကို သွား သတိရတယ်။ အဲဒါတွေက ….
နံပတ် (၁) ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ အလွယ် ဖြတ်လမ်း မလိုက်နဲ့။ ဖြတ်လမ်း လိုက်တဲ့သူဟာ သူ့ ဘဝ တစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ရတတ် တယ်တဲ့ …။
နံပတ် (၂) ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို မစပ်စု မပတ်သက် ပါနဲ့တဲ့ …။
နံပတ် (၃) စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန် ဒါမှမဟုတ် နာကျင်ဝမ်းနည်းနေချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချ ပါနဲ့တဲ့ …။
အရမျးဆငျးရဲလှနျးတဲ့ လငျမယားနှဈယောကျ ၊ ယောကျကြားက မိနျးမကို ထားခဲ့ပွီး အလုပျသှားလုပျသောအခါ …
လကျထပျတာ ၁ နှဈလောကျပဲ ရှိသေးတဲ့ အရမျး ဆငျးရဲတဲ့ လငျမယားနှဈယောကျ ။ ဆငျးရဲလှနျးလို့ တနမှေ့ာ ယောကျကြားလုပျသူက မိနျးမကို ပွောတယျ။ မိနျးမရေ ငါတို့တော့ ဒီအတိုငျးနလေို့ မဖွဈတော့ဘူး။ ဆငျးရဲလှနျးလို့ ငတျသဖေို့ပဲ ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ ငါမွို့တကျပွီး သူဌေး တဈယောကျဆီမှာ အလုပျသှားလုပျမယျ …။
ဘာအလုပျရမယျ ဘယျနှယျနှဈ ကွာမလဲတော့ မပွောနိုငျဘူး။ ဒါပမေဲ့ ငါ့ကိုယုံပါ နငျကို ဘယျတော့မှ သစ်စာမဖောကျဖူး။ နငျလညျး ငါ့ကို သစ်စာရှိမယျဆိုတာ ယုံတယျလို့ ပွောပွီး မိနျးမကို သူ မွို့ပျေါတကျအလုပျ လုပျမယျဆိုပွီး တိုငျပငျတယျ။ မိနျးမကလညျး ရှေးစရာ လမျးမရှိတော့ ခှငျ့ပွုလိုကျတယျ။
အဲလိုနဲ့ လူငယျဟာ မွို့ပျေါတကျသှားပွီး အလုပျရှာတယျ။ သူတို့ရှာနဲ့ အရမျးအလှမျးဝေးတဲ့ မျွို့ တဈမွို့က သူဌေးတဈယောကျဆီမှ အလုပျရတယျ။ သူဌေးကလညျး အလုပျစဝငျ ကတညျးက သူ့အပျေါ ကောငျးတယျ။ နစေရာပေးတယျ။ ထမငျးအလကား ကြှေးထားတယျ။ အဲဒါနဲ့ လူငယျကလညျး ကနြေျာ့ လစာကို သူဌေးပဲ သိမျးထားပေးပါ။ ကနြျော ရှာအပွီး ပွနျမှပဲ အကုနျမှတျထားပွီး ထုတျပေးလိုကျပါလို့ ပွောလိုကျတယျ …။
သူဌေးကလညျး လူငယျပွောတဲ့ အတိုငျး သူ့လုပျအားခ ငှတှေကေို သိမျးထားပေးတယျ။ အဲလိုနဲ့ လုပျလိုကျတာ အနှဈ ၂၀ ပွညျ့တဲ့အထိ တခါမှ မပွနျဖွဈဘူးတဲ့..။ အနှဈ ၂၀ ပွညျ့ပွီး ရကျအနညျးငယျကွာမှ လူရှယျက သူ့သူဌေးကို ပွောတယျ။ သူဌေး ခငျဗြာ ကနြျော အိမျအပွီး ပွနျပါတော့မယျ။ ကနြျောစုထားတဲ့ ငှတှေေ ပွနျပေးပါ ဆိုတော့ ….
သူဌေးက ကောငျးပွီ။ ငါမငျးကို ပွနျခှငျ့ပွုတယျ။ နောကျတဈခုက မငျးကိုရှေးစရာ ၂ ခုပေးမယျ။ ၁ ခုက မငျးစုထားတဲ့ ငှတှေေ အကုနျပွနျယူသှားလို့ ရတယျ။ နောကျတဈခုက မငျးဘဝ အတှကျ အသုံးဝငျမဲ့ အကွံပေး စကား ၃ ခှနျးပေးလိုကျမယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီ ၂ ခုထဲက တဈခုပဲ ရှေးရမယျ။ စုထားတဲ့ငှတှေေ ယူရငျ အကွံပေးစကား ၃ ခှနျးမရဘူး …။
အကွံပေးစကား ၃ ခှနျး လိုခငျြရငျ စုထားတဲ့ငှတှေေ ပွနျမပေးဘူးလို့ ပွောလိုကျတယျ။ လူငယျကို ဆုံးဖွတျဖို့ အခြိနျ ၁ ရကျပေးမယျ။ လူငယျလညျ စဉျးစားတာပေါ့။ သူ့ သူဌေးပေးတဲ့ အကွံတှဟော ဘဝအတှကျ အသုံးဝငျမှာ သူသိတယျ။ အိမျပွနျရငျ အနှဈ ၂၀ တောငျ လုပျခဲ့တဲ့ အတှကျ ငှပွေနျပေးနိုငျမှ ဖွဈမယျ။ ဘာမှ မပါသှားရငျလညျး အကုနျလုံးရဲ့ဝိုငျးဝနျး ကဲ့ရဲ့ခွငျးကို ခံရနိုငျတယျ။ အဲလိုနဲ့ မနကျရောကျတော့ သူ့သူဌေးရဲ့အကွံပေး စကား ၃ ခှနျးကိုပဲ ယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျ ပါတယျ …။
သူ့ သူဌေးကလညျး မငျးသခြောပွီလား။ အကွံပေး စကား ၃ ခှနျးယူရငျ မငျး အနှဈ ၂၀ လုံးလုံး စုထားတဲ့ ငှတှေေ ပွနျရမှာ မဟုတျဘူးနျော ဆိုတော့။ လူငယျက သခြောပါတယျ။ ကနြျော သူဌေးဆီမှာ အနှဈ ၂၀ လုံးလုံး လုပျပွီး အမြားကွီး သငျကွားခဲ့ရတယျ။ အဲဒီ အတှေ့ အကွုံတှနေဲ့ မိသားစု တဈခုကို ကောငျးကောငျးလုပျကွှေးနိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး သူဌေးပေးမဲ့ အကွံပေး စကား ၃ ခှနျး ကလညျး ကနြျော အတှကျ အရမျး အသုံးဝငျမှာ သခြောပါတယျ လို့ ပွနျပွော တယျ …။
သူဌေးကလညျး အေးဒါဆို ငါမငျးကို အကွံပေး စကား ၃ ခှနျး ပဲ ပေးလိုကျမယျ။ သသေခြောခြာ မှတျသားသှား ကောငျလေးရေ လို့မှာလိုကျတယျ။ အကွံပေးစကား ၃ ခှနျးက …..
( နံပတျ (၁) ဘဝမှာ ဘယျတော့မှ အလှယျ ဖွတျလမျး မလိုကျနဲ့။ ဖွတျလမျး လိုကျတဲ့သူဟာ သူ့ ဘဝ တဈခုလုံး ပေးဆပျရတတျတယျတဲ့ ….
နံပတျ (၂) ကိုယျနဲ့ မဆိုငျတဲ့ ကိစ်စကို မစပျစု မပတျသကျ ပါနဲ့တဲ့ ….
နံပတျ (၃) စိတျဆိုး ဒေါသထှကျနတေဲ့ အခြိနျ ဒါမှမဟုတျ နာကငျြဝမျးနညျးနခြေိနျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြမခြ ပါနဲ့တဲ့ …. )
နောကျပွီး သူဌေးက လမျးစရိတျငှေ အနညျးငယျနဲ့ လူရှယျ လမျးမှာ စားဖို့ ပေါငျမုနျ့ ၃ လုံးထညျ့ပေးလိုကျတယျ။ မငျး ဒီပေါငျမုနျ့ ၂ လုံးက လမျးမှာ စာရငျစားဖို့။ ဒီ တဈလုံးကတော့ မငျးမိသားစုနဲ့ တှမှေ့ စားဆိုပွီး မှာလိုကျတယျ …။
အဲလိုနဲ့ လူရှယျဟာ အိမျပွနျဖို့ အထုတျအပိုးတှနေဲ့ ထှကျလာတာပေါ့။ တျောတျောလညျး လြောကျမိရော။ လမျးစုံ လမျးခှ တဈခုတှတေ့ယျ။ အနှဈ ၂၀ တောငျ ရှိပွီဆိုတော့ အိမျပွနျလမျးလညျး မမှတျမိတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီနားမှာတှတေဲ့ လူတဈယောကျကို မေးတယျ။ ဘယျလမျးသှားရမလဲဆိုတော့ အဲဒီလူက ဒီလမျးကသှားရငျ ၅ ရကျနဲ့ရောကျမယျ ဟိုဘကျလမျးက သှားရငျ အရကျ ၂၀ လောကျကွာမယျဆိုပွီး ပွနျဖွတေယျ။ အဲဒါနဲ့ သူ့ သူဌေး ပထမဆုံး ပေးတဲ့ အကွံပေးစကား သှားသတိရ လိုကျတယျ …။
အဲဒါက ဘဝမှာ ဘယျတော့မှ အလှယျ ဖွတျလမျး မလိုကျနဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဖွတျလမျး မလိုကျတော့ပဲ အရကျ ၂၀ သှားရတဲ့ ပိုကွာတဲ့ လမျးကို ရှေးလိုကျတယျ။ အဲလိုနဲ့ တပတျလောကျ သှားမိတဲ့ အခြိနျမှာ တခွားခရီးသှားဖျောတှနေဲ့ ဆုံမိပွီး ပွနျကွားတာက ၅ ရကျပဲ သှားရတဲ့လမျးမှာ ဓါးပွတှေ ရှိတယျတဲ့..။ ဓါးပွတှကေ ပစ်စညျးယူရုံသာ မက လူပါသတျပွီး အပြောကျရှငျးလရှေိ့တယျတဲ့..။ အဲဒါနဲ့ သူ့သူဌေးပေးလိုကျတဲ့ အကွံပေးခကျြဟာ သိပျမှနျပါလား ဆိုပွီး ကနြေပျသှားတယျ …။
အဲလိုနဲ့ လမျးမှာ နားဖို့ ဟိုတယျလေးတှတေ့ယျ။ သူ့မှာ ရှိတဲ့ အဝတျအစားတှကေ ညဈပတျနပွေီး။ ရေးမိုးခြိုးပွီး တဈညလောကျ နားခငျြတာနဲ့ အဲဒီဟိုတယျမှာ တညျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျ တယျ …။
အဲလိုနဲ့ ညဖကျ သနျးခေါငျယံ အခြိနျမှာ အသံနကျကွီး ကွားရတယျ။ အဲဒါနဲ့ လူငယျဟာ ဟိုတယျ အခနျးကနေ ထှကျကွညျ့တယျ။ ဟိုတယျ အရှဘေ့ကျမှာ အလငျးရောငျတောကျပနတေယျ …။
အဲဒီနောကျ သူအလငျးရောငျ ရှိတဲ့ရှိ သှားကွညျ့မယျ လုပျပွီးမှ နံပတျ (၂) အကွံပေးစကားကို သှားသတိရတယျ။ အဲဒါက ကိုယျနဲ့ မဆိုငျတဲ့ ကိစ်စကို မစုပျစု မပတျသကျနဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဒါငါနဲ့ မဆိုငျပါဘူးလေ ဆိုပွီး။ သူ့အခနျးထဲ ပွနျဝငျအိပျနလေိုကျတယျ။ မနကျလငျးတော့ မကျြနှာသဈပွီး နံနကျစာစားတော့ ဟိုတယျ မနျနဂြောက အံသွတဲ့ မကျြနှာနဲ့ သူ့ကိုကွညျ့နေ ပါတယျတဲ့ …။
အဲဒါနဲ့ လူရှယျကို မေးတယျ မငျး ညက အသံနကျကွီး မကွားရဘူးလားတဲ့..။ ကွားတာပေါ့လို့ ပွနျပွောတယျ။ ဟိုတယျ အပွငျဘကျမှာရော တောကျပတဲ့ အလငျးရောငျ မတှဘေူ့းလား ဆိုတော့ တှပေ့ါတယျပေါ့။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာ မငျးသှားမကွညျ့ ဘူးလားဆိုတော့။ မကွညျ့ပါဘူး။ ငါနဲ့မှ မဆိုငျတာ ဆိုပွီး ပွနျဖွေ လိုကျတယျ …။
အဲဒီကမြှ ဟိုတယျ မနျနဂြောက သူ့ကို ရှငျးပွတယျ။ အေးမငျးသှား မကွညျ့လို့ မငျး အသကျရှငျတာ.။ အဲဒါ စုနျးမကွီး တဈယောကျက အရမျးလှတဲ့ ကောငျမလေး ပုံစံ ဖနျတီးပွီး လာရပျနတော..။ ထှကျကွညျ့မိတဲ့ လူတိုငျး ကောငျမလေး ယောငျဆောငျထားတဲ့ စုနျးမကွီး နောကျလိုကျသှားရပွီး။ တဈယောကျမှ ဟိုတယျကို ပွနျမလာခဲ့ကွဘူး။ မငျး တဈယောကျပဲ ရှိသေးတယျ။ အခုလို ထှကျမကွညျ့လို့ အသကျရှငျရတာ..။ ငါတို့လညျး သူ့ကို ကွောကျလို့ ကွိုမပွောထားရဲဘူးလို့ ပွနျပွောတယျ …။
လူရှယျလညျး ဒုတိယ အကွံပေးခကျြဟာလညျး အရမျးအသုံးဝငျပွီး သူအသကျရှငျခှငျ့ ရပါလားဆိုပွီး ဝမျးမွောကျနတောပေါ့.။ အဲလိုနဲ့ သူ့အိမျရှိရာဘကျ ခရီးဆကျခဲ့တယျ။ ရကျအနညျးငယျကွာပွီး သူ့ရှာကို ရောကျလာတယျ။ ရောကျတဲ့ အခြိနျက နဝေငျရီတရောအခြိနျ သူ့အိမျကို ခမျလှမျးလှမျးက မွငျနရေတယျ။ အဲဒီခြိနျ မီးရောငျအောငျမှာ သူ့မိနျးမကို ယောကျကြားတဈယောကျက ဖကျထားတာကို လှမျးတှလေို့ကျတယျ …။
သူ့ဒေါသတှေ ဆူဝသှေားတာပေါ့။ ကွညျ့စမျးငါက သစ်စာရှိရှိနဲ့ သအေောငျကွအေောငျ အလုပျလုပျပွီး ငှရှောခဲ့ရသလောကျ သူက တခွားယောကျကြားနဲ့ ဖောကျပွနျနတေယျ။ နငျတို့ နှဈယောကျလုံးကို သတျမယျဆိုပွီး သှားမလို့ ခွလှေမျးလိုကျတယျ။ အဲဒီ အခြိနျမှာပဲ တတိယ အကွံပေးခကျြကို သှားသတိရမိလိုကျတယျ …။
အဲဒါက စိတျဆိုး ဒေါသထှကျနတေဲ့ အခြိနျ ဒါမှမဟုတျ နာကငျြဝမျးနညျးနခြေိနျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြမခြ ပါနဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူမသှားတော့ပဲ မနကျကမြှ သူ့မိနျးမ သှားတှမေ့ယျလို ဆုံးဖွတျပွီး အိမျနဲ့ ခမျးလှမျးလှမျးက လယျတောထဲမှာ အိပျဖို့ စဉျးစားလိုကျတယျ။ နောကျပွီး အိပျနရေငျး စဉျးစားမိတာက။ သူထငျသလို ဟုတျနရေငျ သူ့မိနျးမနဲ့ သူ့ခဈြသူကို မသတျတော့ဘူး။ တိတျတိတျလေးပဲ သူ့သူဌေးဆီပွနျပွီး အလုပျလုပျတော့မယျလို့ စဉျးစားနလေိုကျတယျ …။
အဲလိုနဲ့ မနကျရောကျတဲ့ အခြိနျမှာ သူအိမျသှားပွီး တံခါးခေါကျလိုကျတယျ။ သူ့မိနျးမက တံခါးထှကျဖှငျ့ပေးပွီး သူ့ယျောကြားမှနျး သိတာနဲ့ ခြုံးပှဲခြ ငိုတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယောကျကြားက သူ့မိနျးမကို စောငျ့တှနျးလိုကျပွီး နငျ့အကောငျ ဘယျမှာလဲလို့မေးလိုကျတယျ။ မိနျးမက ဘယျအကောငျလဲဆိုတော့မှ ညက နငျနဲ့ဖကျနတေဲ့ အကောငျလဆေိုတော့မှ။ အဲဒါရှငျ့သား ရှငျ့ သိရဲ့ လားလို့ ငိုပွီးပွနျပွောတယျ။ ရှငျထှကျသှားပွီး ရကျအနညျးငယျကွာမှ ကမြမှာ ကိုယျဝနျကနျြခဲ့မှနျးသိတယျ …။
အဲဒါ အခုသူ့အသကျ ၂၀ အရှယျထိ မဖောကျမပွနျပဲ သူ့ကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့တာလို့ ပွနျပွောတယျ။ အဲဒါနဲ့ မိနျးမက အခနျးထဲမှာ အိမျနတေဲ့ သူ့သားကို နိုးပွီးဒါ နငျအဖလေဆေိုပွီးပွတယျ။ အဲဒီတော့မှ ယောကျကြားလညျး မိနျးမနဲ့ သားကိုဖကျပွီးငိုတယျ။ တျောသေးတယျကွညျ့စမျး ငါမှားတော့မလို့။ မနညေ့က နငျတို့သားအမိကို တှပွေီ့း ဒေါသ အလြောကျသတျမိတော့မလို့။ ငါ့သူဌေး အကွံပေးစကား နားထောငျမိလို့ မသတျမိတာဆိုပွီး သားနဲ့ မိနျးမကို ပွနျပွောပွတယျ …။
ငါ့အနှဈ ၂၀ လုပျအားခကို မယူပဲ သူဌေး အကွံပေးစကား ၃ ခှနျးကို မွဝေယျမကြ နားထောငျခဲ့လို နငျတို့နဲ့ အသကျရှငျလကျြပွနျတှရေ့တာ..ဆိုပွီး သူလမျးမှာ ကွုံခဲ့ရတာတှေ ဖွဈကွောငျးကုနျစငျပွောပွတယျ။ ငါမှာ ဘာငှမှေ မပါပမေဲ့ ငါ့အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ နငျတို့ သားအမိကို ကောငျးကောငျးလုပျကြှေးပါ့မယျ ဆိုပွီး နှဈသိမျ့လိုကျတယျ …။
ငါမှာ မိသားစုနဲ့တှရေငျစားဖို့ ပေါငျမှနျ့ တဈလုံးတော့ ရှိသေးတယျ။ မိနျးမ နငျကျောဖီဖြျော ဒီပေါငျမုနျ့နဲ့ မနကျစာ စားကွတာပေါ့ ဆိုပွီး ပွောလိုကျတယျ။ ပေါငျမုနျ့ လှီးနရေငျးနဲ့ ခပျမာမာလေး တခုကို လှီးမိတာနဲ့ ထုတျကွညျ့တော့ ရှပွေားတှေ ပေါငျမုနျ့ထဲမှာ မွှပျထားတာတှရေ့တယျ …။
အဲဒီထဲမှာ စာလေး တဈစောငျလညျးတှရေ့တယျ။ ဒါမငျး အနှဈ ၂၀ လုပျအားခနဲ့ ညီမြှတဲ့ ရှတှေပေဲတဲ့။ အောကျမှာ သူ့သူဌေးလကျမှတျ တိုလေးနဲ့။ လူရှယျလညျး သူ့သူဌေးမကျြနှာကို ပွနျမွငျယောငျလာပွီး သူ့သူဌေးပေးတဲ့ အကွံပေး စကား ၃ ခှနျးကို သှား သတိရတယျ။ အဲဒါတှကေ ….
နံပတျ (၁) ဘဝမှာ ဘယျတော့မှ အလှယျ ဖွတျလမျး မလိုကျနဲ့။ ဖွတျလမျး လိုကျတဲ့သူဟာ သူ့ ဘဝ တဈခုလုံး ပေးဆပျရတတျ တယျတဲ့ …။
နံပတျ (၂) ကိုယျနဲ့ မဆိုငျတဲ့ ကိစ်စကို မစပျစု မပတျသကျ ပါနဲ့တဲ့ …။
နံပတျ (၃) စိတျဆိုး ဒေါသထှကျနတေဲ့ အခြိနျ ဒါမှမဟုတျ နာကငျြဝမျးနညျးနခြေိနျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြမခြ ပါနဲ့တဲ့ …။